u-Shamsi uncoma abaphosayo be-SA ‘A’
i-spinner se-Powerade South Africa A u-Tabraiz Shamsi ubonga ama-wicket akhe amane ekunqobeni ngama-runs angu-164, benqoba i-One-Day Triangular Series bedlala ne-Afghanistan A ngeSonto ukuletha incindezi abanye abadlali abaphosayo kunokwenziwe uyena.
i-left-arm chinaman ithole u-4/19 njengoba iqembu lasekhaya likhiphe izivakashi ngama-runs angu-172 kuma-overs angu-32.2 e-Assupol Tuks ePitoli.
Ovulela i-South Africa, u-Reeza Hendricks wenze ama-runs angu-173, awathole emabholeni angu-145 njengoba iqembu lasekhaya lifike ku-336/5, ngaphambi kokunqoba nge-bonus-point yesibili elandelana.
“Hlezi kumnandi ukudlala indima ekunqobeni kweqembu,” kusho u-Shamsi.
“Kodwa akukho ngami. Wonke umuntu ebedlala indima futhi njengoba ubonile emdlalweni wokuqala kube u-Aaron Phangiso no-Dwaine Pretorius owathatha ama-wicket amaningi. Osukwini, wonke umuntu angeke akwenze lokho, kuzoba umfana oyedwa noma ababili, kodwa amandla awonke umuntu.”
i-South Africa ihlule i-India A ngama-wicket amabili emdlalweni wokuqala futhi u-Shamsi uncome adlala nabo ngendlela abakhuphuke ngayo emidlalweni embili yokuqala.
“Vele i-series isasihambela kahle okwamanje, yombili imidlalo siyinqobe ngama-bonus point, okuyinto enhle,” esho eqhubeka. Saphoxeka e-England, ngakho abafana basebenza kanzima ukulungisa lokho. Kube nekhempu ngaphambi kwe-series futhi wonke umuntu usebenza ngokuzikhandla. Ngiyajabula ukuthi imiphumela iyaziveza.
Umdlalo we-South Africa olandelayo bedlala ne-India ungoLwesine futhi u-Shamsi uthi babheke lowomdlalo okwamanje, kunokubheka i-final ngo-August 8.
“Kuzomele siqale singene kwi-final futhi sithembe ukuthi sizoyinqoba,” esho eqhubeka. “Noma sidlale emibili saphinde sayinqoba yombili, njengeqembu angeke sikuthathe kancane. Sifuna ukunqoba imidlalo emibili esele futhi nowesithathu kwi-final.”